LOZAM-PIARAKIODIA TAO TOLIARA : Mpandeha miisa 14 naratra mafy
Araka ny loharanom-baovao voaray, omaly avy ao an-tampon-tanànan’i Toliara dia fantatra fa nisehoana lozam-pifamoivoizana nahatsiravina tany amin’ny 40 km tsy nidirana ny tanàna, ny alahady alina lasa teo iny. 10 juillet 2019
Fiara taksiborosy niala lavaka no nahatonga ny loza izay niafara tamin’ny fivadibadihan’ny fiara. Vokany, saika naratra mafy avokoa ny mpandeha rehetra tao anatiny. Voalaza tamin’izany aza fa miisa 14 eo ireo mpandeha tena voa mafy ary mbola mitsabo tena ao amin’ny Hopitalibe avokoa hatreto.
Fahatapahan’ny tongotra sy tanana no tena nahavoan’ny ankabeazan’ izy ireo. Efa eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana moa ny fanohizana ny fanadihadiana ity tranga ity amin’izao fotoana izao. Eo anatrehan’ny lozam-pifamoivoizana misesilany amin’ny lalam-pirenena fahafito iny dia tsy mitsahatra manentana ireo mpampiasa lalana hatrany ireo mpitandro filaminana misahana ny fifamoivoizana ny mba hitandremana satria dia nohamafisin’izy ireo fa saika vokatry ny tsy fitandremana, toy ny tsy fanajana ny hafainganam-pandeha no tena isany mampirongatra ny lozam-piarakodia eto amintsika, indrindra fa iny lalam-pirenena fahafito iny.